अरुकाे इच्छा विपरीत होली खेल्ने वा होहल्ला गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? सार्वजनिक मुद्दा लाग्ला ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
चैत ५, २०७५ मंगलबार १४:४२:६ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै - तपाइँको होलीको तयारी के छ ? आफन्त साथीभाइलाई रंग लगाएर, पानी छ्यापाछ्याप गरी मनाउँदै हुनुहुन्छ या अरुको इच्छा विपरीत रंग लोला प्रयोग गर्दै हुन्छ । यदि इच्छा विपरीत होली खेल्दै हुनुहुन्छ वा होहल्ला गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई सार्वजनिक मुद्दा लाग्न सक्छ ।
बुधबारको होली पर्व मर्यादित र सभ्य बनाउन भन्दै प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । एक हप्ता अघिदेखि प्रहरीले काठमाण्डाै उपत्यकासहित ७७ वटै जिल्लामा चेतामूलक कार्यक्रम गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बुधबार बिहानैदेखि सुरक्षा जाँचमा कडाइ हुने छ । यस्तै ठाउँ ठाउँमा प्रहरी बिट राख्नुका साथै जाँड रक्सीविरुद्धको कारबाही अभियान पनि बिहानैदेखि सुरु हुनेछ ।
बुधवबार बिहान ७ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको कमाण्डमा ५९७ जना ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिनेछन् ।